HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
“Niady saina be aho, kivy, ary nahatsiaro ho tapi-dalan-kaleha. Izany foana no tsapako, dia hozy aho hoe aleoko mamono tena.”—Adriana, Brezila.
EFA nahatsapa hoatran’i Adriana ve ianao? Kivy be foana izy, ary nilaza ny dokotera fa efa lasa aretina mihitsy ilay izy.
Nikarakara ny ray aman-dreniny i Kaoru, any Japon. Narary izy ireo tamin’izany sady efa be taona. Hoy i Kaoru: “Nandrera-tsaina be ny tany am-piasana tamin’izany. Nalain-komana koa aho sady tsy natory tsara. Nanomboka nieritreritra àry aho hoe milamina be aho izao raha maty.”
Izao koa no nolazain’i Ojebode, any Nizeria: “Nalahelo be foana aho ary nitomany mihitsy, dia nitady fomba hamonoana tena.” Soa ihany fa tsy namono tena i Ojebode sy Kaoru ary Adriana. Mampalahelo anefa fa efa ho 800 000 no manao an’izany isan-taona.
Lehilahy ny ankamaroan’ireo mamono tena. Betsaka tamin’izy ireny no menatra, ka tsy nangataka fanampiana. Nilaza i Jesosy hoe mila dokotera ny olona marary. (Lioka 5:31) Aza menatra mitady fanampiana àry raha kivy be ianao ka mieritreritra ny hamono tena. Mety ho efa lasa aretina mantsy ilay izy. Raha izany no izy dia ilaina ny manatona dokotera. Anisan’ny nandray soa tamin’izany i Ojebode sy Kaoru ary Adriana.
Mety hampiasa fanafody ny dokotera mba hitsaboana an’ilay olona kivy be. Mety ho amin’ny alalan’ny resadresaka koa anefa no itsaboany azy. Mila ny fanampian’ny namany sy ny fianakaviany koa izy. Tokony hahay hipetraka eo amin’ny toeran’ilay marary izy ireo, ho tsara fanahy, ary hanam-paharetana. I Jehovah anefa no namana tsara indrindra, ary mampiasa ny Teniny izy mba hanampiana antsika.
HIFARANA IHANY VE ILAY IZY?
Elaela mihitsy matetika ny fitsaboana ny olona kivy be. Mila manova ny zavatra sasany fanaony koa izy ireo. Matokia anefa fa mbola afaka ny ho sambatra ianao, na dia tratran’izany aza. Zavatra tsara hoatr’izany no ifantohan’i Ojebode. Hoy izy: “Tsy andriko ny hahatanterahan’ny Isaia 33:24. Resahina ao fa, indray andro any, dia tsy hisy intsony ny olona hiteny hoe ‘marary aho.’” Afaka manao hoatran’i Ojebode koa ianao, ka misaintsaina an’ilay “tany vaovao” ampanantenain’Andriamanitra. Tsy hisy na inona na inona hampalahelo na hampiady saina intsony amin’izay. (Apokalypsy 21:1, 4) Tsy ho kivy intsony ianao mandrakizay. “Tsy hotsarovana intsony, na hitamberina ao am-po” ny zavatra rehetra mampalahelo anao.—Isaia 65:17.
Mahazo tsara ny fihetseham-ponao Andriamanitra.
I Jehovah no tena mahazo tsara ny fihetseham-ponao, ary te hanampy anao izy.
Saintsaino ny Tenin’Andriamanitra.
“Nangataka ny ho faty [i Elia], ka nanao hoe: ‘ ... Esory amin’izay ny aiko, Jehovah ô.’”—1 Mpanjaka 19:4.
Hoy i Ojebode: “Nisaintsaina ny Tenin’Andriamanitra aho, dia tena nanampy ahy izany. Hay i Elia mpaminany mba efa nahatsapa hoatran’ahy koa.”
Mampahery ny tantaran’ny olona ao amin’ny Baiboly.
Hoy i Jesosy tamin’i Petera: “Efa nitalaho ho anao ... aho mba tsy ho levona ny finoanao.”—Lioka 22:32.
Tena kivy ny apostoly Petera hoe nanda an’i Jesosy intelo, ary nitomany be. Hoy i Kaoru: “Nampahery ahy ny tantaran’i Petera. Hitako hoe tsy nanao tsinontsinona ny fihetseham-pony i Jehovah sy Jesosy.”
“Tsy hotsarovana intsony, na hitamberina ao am-po” ny zavatra rehetra mampalahelo anao.—Isaia 65:17
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Hakiviana?